मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त, कस्को बन्ला गण्डकीमा सरकार ? – Mission Khabar
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त, कस्को बन्ला गण्डकीमा सरकार ?
मिसन खबर २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २२:३१
पोखरा, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्मन्त्री नियुक्त हुनु भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिदा २७ मत मात्रै पाउनुभएको हो ।
विपक्षमा ३० मत खसेसँगै अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् । १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै अब विपक्षी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ सभामुखबाहेक, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छन् ।मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेदकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएसँगैमुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्ने देखिएको छ ।